Vulnerable Zimbabweans Need Urgent Help to Cope With COVID-19 - allAfrica.com
In his capacity as African Union Chairperson, South African President Cyril Ramaphosa has called for the lifting of sanctions on Zimbabwe and Sudan to allow all African countries access to resources in a bid to fight the coronavirus pandemic. This comes as Zimbabweans, unable to access state benefits, food and even running water, fear the worst. Meanwhile, some Zimbabweans living in South Africa want to be repatriated, saying they are battling to make ends meet during the lockdown.
263Chat, 22 April 2020
Zimbabwe on Wednesday confirmed the death of a fourth person who died from the coronavirus related illness at a private hospital in Harare. Read more »
The Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (Potraz) last week denied the myth going around that there is a link between the COVID-19 pandemic and… Read more »
Zimbabwe: Questions Over COVID-19 Death in Private Hospital
New Zimbabwe, 22 April 2020
Zimbabwe's latest Covid-19 death victim was 82-year-old mother to Zanu PF politician and ex-minister Sylvester Nguni. Read more »
Consul General says the embassy is compiling a list of people willing to return to Zimbabwe Read more »
Government has with immediate effect announced a price moratorium which will see prices of basic commodities reverting back to the 25 March 2020 level, 263Chat can report. Read more »
A top government official has hinted at schools re-opening in August and go all the way to Christmas to compensate for time lost due to Covid-19 and the subsequent national… Read more »
Zimbabwe: Suspected COVID-19 Case in Karoi
Karoi District Hospital is currently isolating a patient with COVID-19 symptoms, according to Acting District Medical Officer for Hurungwe, Dr Charles Mupfururirwa. Read more »
Zimbabwe: Hard Pressed Vendors Resort to Selling Liquefied Petroleum Gas At Home
Some informal dealers of Liquefied Petroleum (LP) gas are resorting to selling the highly flammable commodity in their homes during the Covid-19 lockdown, exposing lives and… Read more »
Zimbabwe: Govt Assessing Impact of COVID-19
The Minister of Finance and Economic Development, Professor Mthuli Ncube has revealed that Government is assessing and calculating figures to measure the impact of the COVID-19 and… Read more »
Zimbabwe: Former Minister Nguni's Mother Dies From COVID-19
The Herald, 22 April 2020
The late Ambuya Nguni, mother to former Cabinet Minister Mr Sylvester Nguni, will be buried this afternoon after becoming the fourth person in the country to die of Covid-19. Read more »
Zimbabwe: 'COVID-19 Donations Will Be Accounted For'
The Herald, 23 April 2020
All donations being made by corporates and individuals towards the fight against Covid-19 will be put to good use and accounted for, President Mnangagwa has said. Read more »
Africa: Lift Zimbabwe, Sudan Sanctions - AU
Sanctions imposed on Zimbabwe and Sudan should be lifted immediately to give the two countries enough time to fight Covid-19. Read more »
Zimbabwe: Zimbabweans Repatriating Dead Relatives Face 21-Day Quarantine Before Funerals
Zimbabweans accompanying bodies of dead relatives from outside the country now face 21 days compulsory quarantine before they can be allowed to proceed to bury their loved ones. Read more »
Zimbabwe: Fourth Coronavirus Death Triggers Contact Hunt
An 82-year-old woman from Mhondoro died from Covid-19 yesterday morning triggering a search for potential contacts since she was in almost total isolation at her homestread. Read more »
New Zimbabwe, 23 April 2020
Zimbabwe Diamond Allied Minerals Workers Union (ZDAMWU) has demanded room to monitor how mines are operating and protecting the health of employees in the wake of COVID-19. Read more »
During uncertain times it's normal to think of our own immediate needs and forget that of our neighbours and communities, but not for Judy Murambinda, a kindhearted Zimbabwean ... Read more »
South Africa/Zimbabwe: Katsande Denies Donating Food Parcels to Zimbabweans in Soweto